New Apple kudzidza neApple Watch uye COVID-19 | Ndinobva mac
Kambani yeCupertino ichangobva kuzivisa chidzidzo chekubatana nevanoongorora kubva kuYunivhesiti yeWashington umo inotarisirwa kuwedzera mikana yeApple Watch. Sezvo iwe uchigona kuverenga mumusoro wenyaya ino, izvo zvakagadzirirwa kuyera mune zvakati kana zvishoma nenzira chaiyo Kukwanisa kweApple Watch kuona zvirwere zvekufema.
Ehezve, zvinoita sezviri pachena kuti iyo Apple Watch ichiri kutsvaga sarudzo dzakakosha kuchengetedza hutano hwevanhu uye mhando iyi yekudzidza inogona kujekesa kusahadzika kwakawanda. Mune ino kesi algorithms ndiyo kiyi yekuona idzi zvirwere pakutanga Uye haisi nguva yekutanga kuti tiverese kana kunzwa zvidzidzo pane izvi zvinogona kuitika neApple Watch.
Mitambo uye hutano hazvisi kure sekufunga kwedu uye kazhinji tinofunga kuti kumwe kunyorera kana zvinyorwa zvakagadzirwa neApple chishandiso hazvibatsiri, asi hapana chingave chinowedzera kubva pachokwadi. Iyo sensors iyo iyo Apple Watch ine uye iko kuvandudzwa kunowedzerwa imwe neimwe vhezheni nyowani kunogona kuve kiyi yekuona chero chirwere chekufema uye nekuda kweichi chikonzero ivo vanotanga ichi chidzidzo chitsva pamwechete ne University of Washington.
Kubva AppleInsider Ivo vanotoratidza zvimwe zvekuratidzwa kwechidzidzo ichi izvo zvinogara kweinenge hafu yegore kana kupfuura umo zvinyorwa zvinonakidza zvinogona kuwanikwa mukuonekwa kwe COVID-19, semuenzaniso. Kuyerwa kweropa oxygen saturation, kurova kwemoyo uye imwe data yakaunganidzwa paApple Watch ichave yakakosha pachidzidzo chitsva ichi ruzivo rwakakosha chaizvo uye rwakanaka runotarisirwa yekurwira iyi coronavirus nyowani kana zvimwe zvirwere zvine chekuita nemweya wekufema.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyowani Apple Kudzidza neApple Watch uye COVID-19
"Matangiro Matsva" chitsva cheApple cheMacs